Vaovao - fomba famokarana lamba boaty hazavana 3M, fomba fametrahana lamba boaty hazavana 3M
Antsoy izahay: 0086-13405910005
Fomba famokarana lamba boaty 3M hazavana, fomba fametrahana lamba boaty hazavana 3M
1. Fomba fametahana maina amin'ny fomba fametrahana lamba boaty maivana
Raha ny marina, ny mametaka mivantana ilay horonantsary amin'ireo fitaovana nopetahana, mametaka pika maina, naoty casting ary ireo sary mihetsika manify tena manify. Soso-kevitra ny hametahana sosona taratasy fametrahana toerana manokana eo amboniny. Aza esorina amin'ny taratasy paty maina ny taratasy fametahana iray, zorony iray fotsiny matetika. Apetraho aloha ny toerana ary apetaho ny zoron'ny taratasy miampy, avy eo sintomy moramora amin'ny tanana iray ilay taratasy mpanohana, ary esory moramora amin'ny tanana hafa ilay taratasy eo ambany. Tandremo ny fandrindrana ary aza mampiasa hery be loatra, raha tsy izany dia hiteraka ketrona mora foana. Mazava ho azy, ny hery dia tsy tokony ho kely loatra, raha tsy izany dia hamokatra miboiboika mora foana.
Fanamarihana: ny fomba famaohana maina dia mitaky tompo mahay sy mahavariana, izay tsy mora takatra. Ity fomba ity dia matetika tsy atolotra amin'ny sarimihetsika lehibe.
2. Ahoana ny fametrahana ny fomba fametahana lena amin'ny lamba boaty maivana
Manoro hevitra anao izahay hampiasa ny fomba fametahana lena, izay azo antoka kokoa noho ny fomba fametahana maina
1. Manomàna tavoahangy famafazana afaka manery rano sy manampy detergent. Amin'ny ankapobeny, ny tahan'ny detergent amin'ny rano dia 0,5%. Ahintsano ny tavoahangy famafazana hamokarana sombin-javatra bebe kokoa.
Fanamarihana: Tokony ho ambany noho ny maro hafa izy io, raha tsy izany dia hisy bontolo kely maro eo anelanelan'ny sarimihetsika sy ny veneer.
2. Ahodino miakatra mankany ambony ny taratasy farany ambany amin'ilay sarimihetsika, esory moramora ny taratasy eo ambany, ary avereno miverimberina eo ambonin'ny rano vita amin'ny fingotra ilay rano avy eo aoriany ny taratasy eo ambany, ary afindra amin'ilay faritra voalamina ilay sarimihetsika. Amin'izao fotoana izao, very ny firaiketam-pony ilay sarimihetsika ary afaka maharitra fotoana fohy. Asandrato ny ao anaty mandra-pahatongan'ny toerana marina.
Fanamarihana: Raha lehibe ilay sarimihetsika dia mila mpiasa hafa ianao hanampy amin'ny fisarihana ilay sarimihetsika, hamafazana rano eny an-tananao alohan'ny hisintonana ilay horonantsary, ary avy eo hofafazana rano eo amboninao mba ho laminina.
3. Mampiasà scraper manokana, indrindra ny scraper misy sisiny tsapa. Sasao tsimoramora avy eo afovoan'ny sarimihetsika amin'ny andaniny roa, apetaho tsindry tsikelikely ary avereno impolo farafahakeliny.
4. Jereo ambany ary zahao raha misy mibontsina mazava tsara ao amin'ilay sarimihetsika mandra-pahamafana ny rano ao anatiny.
Fanamarihana: Raha misy teny ao amin'ilay sarimihetsika dia miandrasa mandritra ny 20-40 minitra aorian'ny famongorana azy, ary avy eo dia aharino ireo teny. Ny fotoana fiandrasana dia voafaritra arakaraky ny maripana manodidina. Raha fohy loatra ny fotoana dia hampihetsika ireo faritra hafa hihetsika; raha lava loatra ny fotoana dia hampitombo ny hasarotan'ilay sarimihetsika izany.
Fotoana fandefasana: Apr-12-2021
faritra indostrialy tangqiaotang zhang jiagang city china